သမီးလေး သဇငျထူးမွငျ့ကို မှေးခငျြလှနျးလို့ ခငျလှိုငျနဲ့ ဇနီးဖွဈသူတို့ ဘယျလိုမြိုးကွိုးစားခဲ့ရတာဆိုတာ ………. ( ဗီဒီယိုဖိုငျ ) – Askstyle
သမီးလေး သဇငျထူးမွငျ့ကို မှေးခငျြလှနျးလို့ ခငျလှိုငျနဲ့ ဇနီးဖွဈသူတို့ ဘယျလိုမြိုးကွိုးစားခဲ့ရတာဆိုတာ ………. ( ဗီဒီယိုဖိုငျ )
သဇင်ထူးမြင့်ကို မွေးလာဖို့ ခင်လှိုင်နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာ တရုတ်ဘုံကျောင်းမှာ သွားဆုတောင်းခဲ့ရတယ်လို့ မငယ်လေးက ပြောပါတယ်။ တကယ်မွေးလာတော့လည်း ခင်လှိုင်တစ်ယောက် အပျော်တွေလွန်ပြီး ပဲခူးကနေ ရန်ကုန်ကို ချက်ချင်းပြန်ပြေးလာခဲ့တာပါပဲတဲ့။
သဇင်ထူးမြင့် ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် တစ်ယောက်သာမက မိသားစု တစ်စုလုံးရဲ့ အသည်းကျော်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ မိဘတွေက သမီးမိန်းကလေး လိုချင်လွန်းလို့ ရူးမတတ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မငယ်လေးက မီဒီယာ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ အန်တီငယ်မှာက သားနှစ်ယောက်ရှိပြီးသားဆိုတော့ နောက်ထပ်သာ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ထပ်မွေးမယ်ဆိုရင် ဖေဖေက ဘုန်းကြီးဝတ်မယ်တောင် လုပ်တာ။ သဲကို မမွေးခင်က မိန်းကလေးဖြစ်ပါစေ ဆိုပြီးတော့ ဘုံကျောင်းတွေမှာလိုက်ဆုတောင်းခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါကြောင့်လားမသိဘူး ဒီပုံစံလေး ထွက်လာတာ။ တကယ်ကိုလည်း သမီးလေး လိုချင်လွန်းလို့ ရူးရပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီနောက် သဇင်ထူးမြင့်က သူမကို မွေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အပျော်ကြီးပျော်နေပုံက တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဟာသတစ်ခုလိုလည်း ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
“ ဖေဖေ ဆိုရင်လေ ပဲခူးမှာ ပွဲကနေတာ မေမေက သမီးလေးမွေးတယ်လို့လည်းကြားရော အိမ်သာထဲကနေ ရေမဆေးပဲ ထွက်ပြေးလာတာ။ ပဲခူးကနေပြီးတော့ ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတာ။ သူ့ကိုယ်သူတောင် လုံးဝမေ့သွားတာတဲ့။ လိုချင်တာက မိန်းကလေးလည်းဆိုတော့ အရမ်းပျော်သွားတာလေ” လို့ ပြောပြရင်း သဘောကျရယ်မောခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ခင်လှိုင်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မငယ်လေးကတော့ အငယ်ဆုံး သမီးလေးဖြစ်တဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြလာပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ အချစ်ရေးမှာ ကန့်ကွက်ထားတာတွေမရှိပါဘူးတဲ့။
“ ကိုယ်တွေတုန်းကလည်း ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ယူခဲ့တာလေ။ ဘယ်ဟာက ကောင်းတယ်၊ ဘယ်ဟာက ဆိုးတယ် ဆိုတာကိုပဲ အစ်မတို့က ပြောပြမယ်။ ဒါပေမယ့် သမီးတို့ကို လမ်းမှားမရောက်အောင် ဆုံးမပေးမယ်။ သားသမီးအကုန်လုံးကိုတော့ လမ်းမှားမရောက်အောင်ပဲ ထိန်းကျောင်းရတာပေါ့” ဆိုပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့က သဇင်ထူးမြင့်ရဲ့ မွေးနေ့အလှူမှာ ဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ခင်လှိုင်ကိုတော့ ဟာသသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်တွေ သိရှိခဲ့တာပါ။ အခုချိန်မှာတော့ ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်အဖြစ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေ ရိုက်ကူးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လှိုင်နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မငယ်လေးတို့မှာတော့ သားသမီး ၃ ယောက်ရှိပါတယ်။ ယောက်ျားလေး နှစ်ယောက်၊ သမီးလေး တစ်ယောက်ပါ။ သားအလတ်ဖြစ်သူ နေရဲ နဲ့ သမီးငယ်လေး သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သားအကြီးဆုံးကတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီး စီးပွားရေးအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လေးစားစွာဖြင့်ခရစ်ဒက် — cele ရပ်ကွက်
လေးစားစှာဖွငျ့ခရဈဒကျ — cele ရပျကှကျ